Laaluush laga soo sheegay habka loo bixiyo fiisaha dal ku jooga Iswiidhan | Somaliska
Laaluush laga soo sheegay habka loo bixiyo fiisaha dal ku jooga Iswiidhan
Dal ku galka sharciga daganaanshaha ah ee dalkaan Iswiidhan, ayaa laga soo sheegaya in laaluush lugu bixiyo. Saxaafarrada Iswiidhan ee ay ku leedahay magaaladda Cammaan ee dalka Urdundalka, ayaa laga soo sheegaya tuhuno la xirriira dadyowga doonaya ineey la midoobaan eheladooda ee soo codsaday.
Warbixintan ayaa waxaa daboolka ka qaaday idaacada wararka Iswiidhan u faafisa ee Ekot iyo muuqbaahiya (telefeeyshinka) ee SVT oo wada jir baaritaankaan u sameeyey.
Warbixinta ayaa sheegeysa in ay la kulmeen gabadha lugu magacaabo Lubna Muuse oo ah haweeney ninkeeda ku sugan yahay dalkaan Iswiidhan islamarkaasina soo codsaday reerkiisa. Lubna ayaa u sheegtay Tv-ga iyo raadiyaha in haweeney tiri waxaan ka tirsanahay howlwadeenadda ay u sheegtay in ay bixiso adduun gaaraya 10.000 (tobboban kun) oo diinaarka dalkaasi una dhiganta 100.000 (booqol kun) ah haddii ay dooneeyso in laga hormariyo safaka dheer.
Lubna oo ah haweeney ka soo qaxday dagaaladda Suuriya, kuna sugan dalkaasi Urdun, ayaa waxaa ay ka mid tahay dadyowga tirada badan ee sugaya in luugu yeero wareysi Interview) la xirriira codsiga ninkeeda oo Iswiidhan ku sugan si ula midoobo qoyskiisa, hase ahaatee ay arrin ka fajicisa kala kulantay howlwadeenadda safaaradda.
Lubna Muuse, haweeney oo lugu qabay ineey bixiso laaluush.
Lubna oo u warameeysay barnaamijka ayaa sheegtay in haweeneydii la soo xirriitay ay u sheegtay in dalbeedka yaalo miiska, balse ay eegayaan xaaladda wiilkeeda oo dhawaan (xilligaasi) qaan gaariba ay muhiim tahay in la eego. Si loogu fududeeyana waa ineey la timaada lacag dhan tobboban kun oo diinaar-ka dalkaasi Urudun. Qarash-ka inkastoo uu ahaa mid aan caqliga galeeyn ineey inaan bixiyo, hadana ay haweeneydii u sheegtay in qiimahaas yahay mid uun mar la bixiyo. Wiilkeedana uu qarka u saaran yahay inuu qaan gaaro inta lugu jiro muddada la sugayo wareysiga(interview-ga).
Dhinaca kale danjiraha Iswiidhan u fadhiya Cammaan ee dalkaasi Urdun Erik Ullenhag, oo la dhageeysiiyey wadahalkii xagga codka ahaa dhexmaray Lubna iyo haweeneydii ka tirsaneyd safaaradda ayaa yaab iyo amkaag ka qaaday, wuxuuna sheegay iney tahay arrin isaga xaggiisa ku cusub.
“Waa arrin halisteeda wadata in laaluush lugu bixiyo siddii safka loo soo hormarin lahaa, misna laga macaasho dad talaabeeysan. Mana ahan arrin aan aqbali karno” ayuu yiri Erik oo misna sheegay in baaritaan ku sameeynayaan warka la xirriira laaluush-ka iyo musuq maasuqa howlwadeenadda safaarada ku dhaqmaan. Erik wuxuu sheegay in xitaa toddobaadyadii hore ay soo gaareen cabasho la xirriirta amujurtaas ayna dabagal ku hayaan.
Ugu dambeyntiina Erik mar wax laga weydiiyey habka musuq maasuqya loo sameeyey xitaa xilliyo hore ayuu ku soo af jiray hadalkiisa in warbixino amuurtaas la xirriirta ay laanta socdaalka uga yimaadeen.
Somaliska.com – Göteborg
Xisbigga Moderat-ka oo doonaya in dib eeggis lugu sameeyo xeerka socdaalka